Ogaden News Agency (ONA) – Dagaalka Ku-tiri Ku-teenta Cadawga ka feejignaada !!
Dagaalka Ku-tiri Ku-teenta Cadawga ka feejignaada !!
Arinta Ku-Tiri Ku-teenta ah oo sida la ogsoon yahay aad u kobca xiliyada ay shucuubta ku jiraan dagaalada, Ilaahay wuu kala dardaarmay umadda inay iska ilaaliyaan, isla marahaantaa kula noqdaan dadka ehelka u ah markay wax maqlaan inta aanay sii faafinin. Wuxuu yidhi Ilaahay;
وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ ۖ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ۗ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلً
Waxaa qofka muslimka ah loo diidayaa gaar ahaan xiliyada cabsida iyo dagaalka uu socdo inuu wuxuu maqlaaba iska sheego isagoon ka hubsan dadka ku shaqada leh arintaa ee ehelka u ah.
Waxaa aad usii kordhaya dagaalka Ku-tiri Ku-teenta ah ee cadawga uu usoo dhiibayo canaasirta uu ku adeegto oo siyaaba kala duwan bulshada ugu dhex jira. Ku-tiri Ku-teentaasi waxay ka mid tahay istraatiijiyadiisa dacaayadeed oo ah inuu jahawareeriyo bulshada, ujeedada uu ka leeyahay cadawga waa inuu shaki ku abuuro.
Dagaalka Ku-tiri Ku-teenta waxay ka mid tahay aaladaha la’isu adeegsado, waxayna ka mid ahayd dacaayadihii lagu jabiyay Jermalka dagaalkii 2aad ee aduunka. Guuldarada cadawga oo guul loo rogo, been aan raad lahayn oo laga sameeyo madaxda iyo hawl-wadeenada ururka, heshiiya aan jirin oo bulshada qayb ka mid ah lala galo oo laga dhigo inay matalaan beel ama urur, arimahaasoo idil ayaa ka mid ah Ku-tiri Ku-teenta uu cadawga adeegsanayo ood moodo inay soo kordhayso waayadan dambe.
Dagaalka Ku-tiri Ku-teenta waxaa sii siyaadiya iyadoo la ogyahay in hadalka sida loo yidhaahdo saacada ka dib uu si weyn isu badalayo oo inta badan uu noqdo mid ka badan boqol jeer sidii loo yidhi oo loogu talagalay. Waxay ka qoreen culumada bulshada in hadalka Ku-tiri Ku-teenta uu yahay habka ugu fiican ee dacaayadda loo faafiyo, iyadoo ay adagtahay in xataa la ogaado meesha laga keenay warka oo qofwalba uu odhanayo un waxaan maqlay ama la yidhi; (Rumours are a perfect medium for unacknowledgeable clandestine propaganda and deception. They are incredibly hard to trace and near impossible to prove their origin; they can spread like the proverbial wildfire.) Akhri ..
Dagaalka Ku-tiri Ku-teenta waxaa loogu talagalaa qofka kaasoo horjeeda, taasoo macmaheedu yahay marka uu Gumaysiga alifayo wuxuu ugu talagalyaa dadka ehelka u ah halganka ee ka naxaya Ku-tiri Ku-teentan, waxaan loosoo dhiibayaa marka hore qof si qarsoon ugu shaqeeya cadawga. Sidaa daraadeed, waxaan uga digaynaa xubnaha ururka iyo taageerayaasha halganka Gobanimadoon inay ka feejignaadaan faafinta Ku-tiri Ku-teenta, oo aanay iyagana noqonin fiiladii sii gudbin lahayd Dacaayadda Cadawga.